IGrey Glacier ilahlekelwa elinye ibhulokhi leqhwa | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukwanda kwamazinga okushisa aphakathi komhlaba kubangela ukuncibilika okungalawuleki kwezinguzunga zeqhwa ezizungeze umhlaba. Kusanda kuzwakala ukuthi iqhwa elikhulu leqhwa liqhekeze inguzunga yeqhwa iGrey eTorres del Paine. Ibhlokhi elihlukanisiwe linobukhulu bamamitha ayi-350 × 380.
Injani inguzunga yeqhwa eGrey lapho kubhekene namazinga okushisa anyukayo?
1 Ukutholakala kwebhulokhi
2 Ukushisa kakhulu komhlaba
Ibhulokhi elihlukaniswe neGrey Glacier lengeza enanini leqhwa elilahlekile eminyakeni eyishumi nambili edlule. Inguzunga yeqhwa ilahlekelwe yingqikithi yama-cubic metres ayi-900 eqhwa eminyakeni eyishumi nambili nje kuphela.
UDokotela Raúl Cordero ungumcwaningi ongungoti ekuguquguqukeni kwesimo sezulu nakwezemfundo eNyuvesi yaseSantiago futhi uqinisekisa ukuthi ukutholakala kwaleli qhwa kuzodala ubunzima bangempela bokuhamba. Ngaphezu kwalokho, iqinisekisa ukuthi i-Grey glacier ayinkulu kunaleyo elahlekile ePatagonia.
Ukulahleka okuqhubekayo kwezinguzunga zeqhwa sekuyinto ehlehlisayo engadaleka ebangelwe ukufudumala kwembulunga yonke. Njengoba izinga lokushisa eliphakeme likhuphuka, inani leqhwa elincibilikayo likhulu kakhulu, njengoba izinkathi ezishisayo zihlala isikhathi eside.
"Ingozi esikhathini esimaphakathi neside emazweni asogwini njengeChile ukuthi ukulahleka kweqhwa kuyaqhubeka, yini eyenza izinga lolwandle likhuphuke. Ekupheleni kwekhulu leminyaka, ukwanda okulindelekile, ezimweni ezinhle kakhulu, kungaba yimitha elilodwa ngaphezu kogu lolwandle futhi lokho kuningi ”, kusho umcwaningi.
Kumele kukhunjulwe ukuthi izindawo ezithinteka kakhulu yimiphumela yokuncibilika okuqhubekayo kwezinguzunga zeqhwa ngamadolobha asogwini. Inani lamanzi eligcinwe engxenyeni yeqhwa likhulu kakhulu futhi lapho liqala ukuncibilika ngokushesha njengoba lenza namuhla, liba nezikhukhula ezimbi.
Njengoba izinguzunga zeqhwa zincibilika, amadolobha asogwini ngeke nje athinteke ngenxa yezikhukhula, kodwa azophinde athinteke nokwenyuka kwamazinga olwandle. Lokhu kwanda akuyona ingozi kuphela ngoba kunamanzi amaningi, kepha, ingxenye enkulu, ingathinta kakhulu iziqhingi uma kunesiphepho nomoya ngenxa yamanzi amaningi ezilwandle nasolwandle.
“Inkinga emhlabeni jikelele ukuthi izinguzunga zeqhwa azilingani. Lokho kusho ukuthi, ibhalansi engemihle: balahlekelwa yiqhwa eliningi ngenxa yokuncibilika noma ngesimo seqhwa kunalokho abakutholayo ngenxa yokuqongelela iqhwa ”, kuchaza uCordero.
Kuyingozi ngempela ukuthi izinguzunga zeqhwa zomhlaba ziyancibilika, ngoba, ngaphezu kokuphakama kwezinga lolwandle nezikhukhula, izinguzunga zeqhwa ziyindawo ebalulekile ekusebenzeni kwemvelo ehambisana nayo.
Njengoba ukufudumala kwembulunga yonke kuqhubeka, kunesidingo esikhulu sokunciphisa imiphumela yako kunokuzama ukukumisa. Imiphumela ebangela ukuguquka kwesimo sezulu emhlabeni wonke isivele isondele futhi ngeke imiswe. Okumele kwenziwe ukunciphisa imithelela yokuguquka kwesimo sezulu ngokunciphisa ukukhishwa kwegesi engcolisa ukushisa ngokushintsha kwamandla kususelwa emandleni avuselelekayo.
Inguzunga yeqhwa iGrey ingenye yezindawo ezinkulu kakhulu ePatagonia, kepha akusiyona elahlekile kakhulu. Kule ndawo kunokuncipha afinyelela kumakhilomitha ayi-13 kumashumi amathathu nje eminyaka.
"Akunasikhombisi sokushintsha kwesimo sezulu okungasheshisi kakhulu. Izinga lolwandle likhuphuka ngokushesha okukhulu; izinguzunga zeqhwa ziyancibilika ngokushesha okukhulu; IGreenland ne-Antarctica balahlekelwa yiqhwa elandayo; sinezinguquko eziphawulekayo ekulandelaneni kwezehlakalo ezimbi njengezivunguvungu ezinkulu, izivunguvungu ezinkulu, isomiso esibi kakhulu, amaza okushisa; Futhi konke lokhu, ngokwemvelo, kuyisibonakaliso sokushesha kokuguquka kwesimo sezulu ”, kuphetha uCordero.
Ukuncibilika kwezinguzunga zeqhwa kusheshisa ukushintsha kwesimo sezulu, ngoba njengoba kuneqhwa elincane, inani elincane lemisebe yelanga liyabonakala futhi, ngakho-ke, kufakwa ukushisa okwengeziwe, okwandisa amazinga okushisa nakakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Inguzunga yeqhwa iGrey ilahlekelwa elinye ibhuloho leqhwa